Shariif Xasan Oo Ku Baaqay In Al-shabaab Dagaal Looga Saaro Sh/hoose – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka K/galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo manta saxaafadda kula hadlay magaalada Baydhabo ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay dagaallo habeenkii xalay ahaa ka dhacay deegaanno ka tirsan Shabellaha Hoose, una dhaxeeyay ciidamada dowladda Federaalka oo garabsanaya dad shacab ah iyo sidoo kale Al-shabaab.
Shariif Xasan ayaa sheegay iney aad uga xun yihiin dagaalladaasi oo uu sheegay in Al-shabaab ay ku doonayaan iney ku gumaadaan dadka shacabka ah waa sida uu hadalka u dhigaye.
Waxa uu Shariif Xasan Sheegay in hadda loo baahan yahay in si mid ah loola dagaallamo Al-shabaabka ku sugan Shabellaha Hoose, islamarkaana si awood ah looga saaro gobolkaasi.
“Waa in la Labo jibaaro dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, waxay doonayaan iney shacabka gumaadaan, dagaalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Shabellaha Hoose, waxay ku gubeen dhul badan oo dad shacab ah ay deganaayeen” ayuu yiri Shariif Xasan.
Ugu dambeyn madaxweynaha maamulka K/galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka in si xooggan loo taageero ciidamada xoogga dalka iyo kuwa K/galbeed si ay ula dagaallamaan Al-shabaab.
Wasiir Bayle Oo Kormeeray Howlaha Shaqo Ee Dekadda Magaalada Muqdisho